६० बर्षपछि संसारले देख्यो यो अ&नौठो र दु*र्लभ दृश्य [५ तस्वीर] – Aaj ko Sandesh
मुख्य पृष्ठ /News/६० बर्षपछि संसारले देख्यो यो अ&नौठो र दु*र्लभ दृश्य [५ तस्वीर]
६० बर्षपछि संसारले देख्यो यो अ&नौठो र दु*र्लभ दृश्य [५ तस्वीर]
706 1 minute read
काठमाडौं । विश्वभर कोरोना भाइरसको डर फैलिएपछि अहिले विश्व लकडाउनमा छ । यो बीचमा मान्छेहरुले कहिल्लै देख्न नपाएका दृश्यहरुको अवलोकन पनि गर्न पाएका छन् । पछिल्लो पुस्ताले नदेखेको प्राकृतिक सौन्दर्यता देख्न पाइएको छ ।
आफ्नो घरबाट नदेखिएको हिमाल अहिले दशकौंपछि देखिएको छ । समुन्द्रमा वर्षौपछि ह्वेल माछा वा डल्फिन देखिएको छ ।विश्वव्यापी कोरोना भाइरसलाई ध्यानमा राख्दै, सावधानीपूर्वक लकडाउनको रूपमा, सामाजिक सञ्जालमा अहिले प्रकृतिको एकपछि अर्को अद्भुत दृश्यहरू देखिएका छन् । यस्तै एक आश्चर्यजनक दृश्य मेक्सिकोबाट आएको छ, जहाँ पहिलोपटक अकापुल्कोको समुद्री किनारबाट समुद्री छालहरूसँगै नीलो बत्ती बाहिर निस्किएर आएको देखियो । एक मिडिया रिपोर्ट अनुसार ६० बर्षमा पहिलो पटक, यो एक अनौंठो दृश्य देख्न पाइएको हो । यसको मुख्य कारण समुद्री पानीको प्रदूषण स्तर कम भएर हो ।
परिणामस्वरूप समुद्री छालहरूले रंगीन बत्तीहरू उत्सर्जन गरे । यो एक अद्वितीय वैज्ञानिक घटना हो । जसलाई बायोलोमिनेसेन्ट भनिन्छ । यसको अर्थ जीवको शरीरबाट प्रकाश निकाल्नु हो । भनिन्छ कि यो घटना गत सोमबारको हो, तर यसको तस्विरहरू अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएका छन् । विज्ञहरूका अनुसार यस्ता घटनाहरू पानीमा सूक्ष्मजीवहरूको जैविक रसायनिक प्रतिक्रियाको कारण मात्र हुन्छन् ।
बीच सड़कबाट बाघले आमालाई खाएपछि छोरिहरुको आ’क्रोश,स्केटिंग गरेर ल्याएको ट्रकले किन अगाडी पठायो? भिडियो हेर्नुहोस
सुत्ने बेला १५ सय किलो शुद्ध सुनबाट बनेको महालक्ष्मी मन्दिरको दर्शन गरि सुत्नुहोला !
प्रहरी प्रतिवेदन : अंगिरा पासी दलित भएकै कारण विरेन्द्रले जबरजस्तीकरणी गरेर मृत्युको मुखमा पुर्याएको
कैयौँ रोगहरुबाट बचाए आमालाई, तर बाघबाट बचाउन सकिन भन्दै भक्कानिए छोरा
विवाह भएको हप्तादिन नबित्दै आमा बन्दै श्वेता